Abakhiqizi kunye nabathengi base-China abahamba ngee-Roller Bearings-factory factory-Rihoo Industry.
Ikhaya > Iimveliso > Track Roller Bearings
I-RIHOO ngumvelisi waseTshayina kumabherethi e-roller track, ukubonelela iibhereth roller bearings kunye nemigangatho echanekileyo yemigangatho kunye nezinto eziphathekayo, kwaye unakho phantsi kweemfuno zabathengi ukuzisa izisombululo kwi-design ukwenza. Senza isitokethi kwimveliso ethile ekhethekileyo - ukulandelela iibhereth roller, nokuba ufunayo kwimeko encinci, sinokukunikezela ngexesha lokunikela ngokukhawuleza.
Oku kulandelayo malunga ne-C Track Roller Bearings ezinxulumene nayo, ndiyathemba ukukunceda uqonde ngakumbi i-C Track Roller Bearings.
Oku kulandelayo malunga neLV Track Roller Bearings ezinxulumene nayo, ndiyathemba ukukunceda uqonde ngakumbi i-LV Track Roller Bearings.
Oku kulandelayo malunga neLR Track Roller Bearings ezinxulumene nayo, ndiyathemba ukukunceda uqonde ngakumbi iLR Track Roller Bearings.
Oku kulandelayo malunga ne-Stud Type Track Roller Bearings ezinxulumene nayo, ndiyathemba ukukunceda ukuba uqonde kakuhle i-Stud Type Track Roller Bearings.